Iindaba - Umboniso womzi-mveliso weeglavu zeLatex
Umboniso womzi mveliso weeglavu zeLatex
Iiglavu ezixhathisa iasidi kunye nealkalizikwabizwa ngokuba ziiglavu zebhokisi yokusebenza, iiglavu ze-incubator, ubude be-30 cm, 38 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 58 cm, 60 cm, 72 cm, 82 cm.Iza ngombala omnyama nomhlophe.Iimpawu, ukuxhathisa okuqinileyo kwe-asidi i-70%, ukuxhathisa okunamandla kwe-alkali i-55%, ithambile kwaye ikhululekile, kulula ukuyinxiba, ifanelekile kwi-electronics, iyeza lebhayoloji, i-chemistry, ukuprinta kunye nokudaya, i-electroplating njalo njalo.
✔ wethuiiglavu zekhemikhalizenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu welatex, zithambile kwaye zingenamanzi.Ihlala kwaye inzimaiiglavu zerabhainokusetyenziswa iminyaka emininzi.
✔ Ikulungele kakhulu ukusebenzisa iiglavu zerabha ezinde xa imibhobho yakho yenkunkuma ivalekile.Kwaye iiglavu zethu ezinde ze-latex ziyakwazi ukuma ukunxiba kunye nokukrazula.
✔ Iiglavu ze-latex azisebenzi kuphela xa kufuneka usebenze ngee-asidi ezinamandla kunye ne-alkalis, kodwa ziluncedo xa unyamekela igadi, ukutsala kunye nokuhlutha loo midiliya ukusuka emhlabeni, malunga neengcambu kunye nezihlahla, njl.
✔ Ubukhulu obufanelekileyo beeglavu ezide zokucoca ezingangeni manzi zibonelela ngokhuseleko oluhle kwaye zinovelwano xa ubamba.
✔ Iigloves ezinde zeLatex zingasetyenziselwa ukugcinwa koomatshini, umsebenzi waseyadini, i-aquarium, ukusetyenzwa kweekhemikhali, ishishini legesi yendalo, ishishini lokushicilela kunye nokudaya, njl.